नेपालमाआज कति थपिए नयाँ काेराेना संक्रमित, यति धेरैकाे मृत्यु — Imandarmedia.com
नेपालमाआज कति थपिए नयाँ काेराेना संक्रमित, यति धेरैकाे मृत्यु
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर थप २ हजार ९ सय १८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी ५३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार ४ सय ६५ पुगेको छ।
यस्तै गत २४ घन्टामा ५ हजार १ सय ४७ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले ४३ जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५०० भन्दा धेरै रहेको छ। त्यस्तै कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ८,४६५ छ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत २४ घण्टामा कुल १४,८१९ जनाको परीक्षण गरिएको थियो।ती मध्ये ९,४३८ जनाको पीसीआर र ५,३८१ जनाको एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गरिएका नमुनामा सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर १९.७ प्रतिशत छ।
सोमवार कोभिड हुनेहरूमध्ये सबभन्दा धेरै उमेर समूह २१ देखि ४० वर्षको ८५८ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसैगरी कुल सङ्क्रमितमध्ये महिला ३९ प्रतिशतजति र पुरुष ६१ प्रतिशतजति रहेका छन्।
हाल आईसीयूमा रहेका बिरामीको सङ्ख्या ९९५ रहेको छ भने भेन्टिलेटरमा ३२४ जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये ४,६८२ बिरामी संस्थागत आइसोलेशनमा रहेका छन्।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि एक साता अघि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१० भुजेलाकी ६५ वर्षीया वृद्धा महाकाली अस्पताल भर्ना भइन् । रुघाखोकी, छाती दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएकाले चिकित्सकले कोरोना संक्रमण भएको आशंकामा उपचार थाले ।
तर स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । फोक्सोमा निमोनिया देखिएका कारण चिकित्सककै सल्लाहमा दोहोर्‍याएर परीक्षण गर्दा पनि रिपोर्ट नेगेटिभ नै आयो ।
तर फोक्सोको सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा कोभिड निमोनिया भएको पुष्टि भएको महाकाली अस्पतालका डा. गोविन्द रोकाया बताउँछन् । अस्पताल आउँदा उनको अक्सिजन लेबल ६० प्रतिशतमा झरेका कारण भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । तर उनलाई बचाउन नसकिएको उनले बताए ।
डा. रोकायाका अनुसार पछिल्लो समय अस्पतालमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका र कोभिड निमोनिया भएका बिरामी उपचारका लागि आउने क्रम बढ्दो छ । तर उनीहरुको पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट भने नेगेटिभ आउने गरेको छ ।
‘त्यस्ता बिरामीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि छातीको सिटी स्क्यान गर्दा कोभिड निमोनिया देखाउँछ,’ रोकायाले भने, ‘लक्षण सबै कोभिडको मिल्ने भएकाले कतै अर्को भेरियन्ट त फैलिएन भन्ने हाम्रो आशंका छ ।’
सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड विभाग प्रमुख डा. शेरबहादुर कमर पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिएको छैन भनेर भन्न नसकिने बताउँछन् । अधिकांश बिरामीमा एउटै खालको समस्या देखिरहेकाले समयमै चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘सबै लक्षण हुँदाहुँदै पनि कोरोना भाइरसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएका केसहरु थुप्रै छन्,’ डा. कमरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पीसीआर रिपोर्टले मात्र मानिंदैन । एक्सरे, अल्टासाउण्डदेखि ब्लड लगायतका जाँचहरु हुन्छन् । सबैले प्रमाणित भए यो रोग हो भनेर भन्न सकिने अवस्था हुन्छ ।’
कतिपय मानिसमा यसअघि नै संक्रमण भएको तर भाइरस निर्मूल भइसकेको अवस्था पनि हुनसक्ने बताए । भाइरसको स्वरुप परिवर्तन भएर आउँदा पनि पीसीआर मेसिनले पुष्टि गर्न नसक्ने हुनाले शंकास्पद लक्षण भएका व्यक्तिको नमुना परीक्षणका लागि नेपाल बाहिर पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘कोरोनाको भेरियन्ट चेन्ज भएर आयो भने पनि मेसिनले पिकअफ गर्न नसक्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘भेरियन्टको अध्ययन गर्न शंकास्पद केसको नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म अस्पतालमा तेस्रो भेरियन्ट भएको आशंका गरिएका बिरामी भर्ना भएको विषयमा जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले आवश्यक भए प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत परीक्षणका लागि पठाइने बताए । ‘नयाँ भेरियन्टका आशंका गरिएका बिरामी अस्पताल आउन थालेका छन् भनेर अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन,’ कार्कीले भने, ‘यदि त्यस्तो रहेछ भने यकिन गर्न नमुना संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाउँछौं ।’